प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - सुझो औद्योगिक पार्क हाइरमेई बुनाई गारमेंट्स कं, लिमिटेड।
सहयोग चाहियो? तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तरको लागि हाम्रो समर्थन फोरमहरूमा भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्!
के म गुणस्तर जाँच गर्न एक नमूना अर्डर गर्न सक्छु?
हो, नमूना आदेश आवश्यक र स्वीकार्य छ।
के उत्पादलाई हाम्रो आफ्नै डिजाइन वा ब्रान्ड लोगो द्वारा उत्पादनहरू बनाउन सक्दछौं?
हो, तपाईं आफ्नो डिजाइन, लोगो, उत्पादनहरूमा लेबल अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि अर्डरको मात्रा थोरै छ, जस्तो प्रति रंग -1०-१०० टुक्रा प्रति रंग। के हामी त्यसलाई स्वीकार्छौं?
हो, हामी यो गर्न सक्दछौं, यदि हामीसँग तपाईंको अर्डर को लागी पर्याप्त स्टॉक कपडा छ।
के तपाइँसँग मुद्रण र कढ़ाई गर्न सुविधाहरू छन्?
हो, हामी गर्छौं, तपाईले हामीलाई मात्र लेआउट / कलाकृति वा तपाईंको विचार पठाउनु पर्छ र हामी त्यस अनुरूप अनुकूलन गर्न सक्छौं।
कहिलेसम्म तपाइँ हामीबाट नमूनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ?
नयाँ ग्राहकहरूको लागि, तपाईंले नमूनाहरूको लागत तिरेपछि, तपाईं हाम्रो नमूनाहरू to देखि days दिन सम्म पाउनुहुनेछ; नियमित ग्राहकको लागि, जब हामी तपाईंको निर्देशन पढ्छौं, तपाईं हाम्रो नमूनाहरू3देखि days दिन सम्म पाउनुहुनेछ
कुन डेलिभरी अवधि तपाईं प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ? कसरी थोक नेतृत्व समय को बारेमा?
नमूना र सानो अर्डरको लागि, यो DHL / ফেडेक्स / यूपीएस / EMS ले लिन्छ about-7 कार्य दिनको बारेमा। थोकका लागि, नेतृत्व समय 35 35-45daydays को लागी आवश्यक हुन्छ, र समुद्री ढुवानी मार्फत बल्क अर्डरको लागि, यसले सामान्य रूपमा १ 15-30० दिन लिन सक्दछ। ग्राहकको पोर्ट।
कस्तो प्रकारको भुक्तानी अवधि सामान्यतया ट्रेड हुन्छ?
हाम्रो भुक्तानी को मुख्य सर्तहरू T / T हो। हामी अरूलाई पनि शब्द प्रयोग गर्छौं, तर केहि कम। ठूलो अर्डरको लागि, %०% निक्षेप जब तपाईं अर्डर गर्नुहुन्छ, शेष %०% भुक्तानी B / L को प्रतिलिपिमा भुक्तान गरिनु पर्छ।